Lalao BAREA - ETHIOPIE Anio zoma no hivarotana ny tapakila
Niova hevitra indray ny Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra ka nambarany tetsy Mahamasina tamin’ny alalan’ny filohany,
omaly alakamisy 14 novambra 2019, fa hamidy anio zoma 15 novambra manomboka amin’ny 10 ora maraina ireo tapakila miisa 18 000 hidirana eny amin’ny Gradin hijerena ny lalaon’ny Barea sy Ethiopie rahampitso sabotsy. Eny amin’ny kianjan’i Makis Andohatapenaka, Coliseum Antsonjobe sy eny amin’ny Guichet Palais des Sport Mahamasina no hamidy izany.Ferana ho 3 ny tapakila azon’ny olona iray vidina. Tsy hisy tapakila hamidy intsony noho izany rahampitso sabotsy andron’ny lalao. Ny vavahady ao Mahamasina kosa hivoha amin’ny 6 ora maraina amin’io andron’ny lalao io ary hidiana tsy azo hidirana intsony manomboka amin’ny 12 ora antoandro. Mpitandron’ny filaminana (zandary sy polisy) miisa 1500 ho karamaina tsirairay avy no hiantoka ny filaminanana. Maillot miloko maitso no hanaovan’ny Barea rahampitso.